Uncategorized | Curiosity Science Magazine
မဂ္ဂဇင်း အသစ်ထွက်ရှိ Year2Issue 5
September 9, 2016 by Thar Htet Aung Leaveacomment
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Curiosity Science Magazine Year2Issue5ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ပါဝင်ရေးသားပေးသူ စာမူရှင်များနဲ့ ဖတ်ရှုသူပရိသတ်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ အောက်ပါ link တွေမှာ သွားရောက် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Mediafire Google Drive Dropbox
ဘုရားသခင်ကြွေအံကစားခဲ့သလား?(သို့မဟုတ်)ကွမ်တမ်ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက် – အပိုင်း (၂)
August 27, 2016 by Thaw Zin Htun Leaveacomment
အပိုင်း ၁ ကို ဖတ်ရှုလိုပါ က https://curiositymm.com/2016/08/24/%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%82%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%A1%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7/ ဒါပေမဲ့ ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာတော့ Einstein ဟာ သူက Quantum Mechanics ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကို တွေ့ရှိပြီလို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတဲ့။ အဲ့တာကတော့ Quantum Mechanics နဲ့ အထူးဆန်းဆုံးနဲ့ အူကြောင်ကြောင်အနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အမှုန်အချင်းချင်းရဲ့ ဆက်ယှက်မှူ ( Quantum Entanglement ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ […]
August 13, 2016 by aungkaungmyat Leaveacomment
ဆင်ခြင်တုံတရားဟာ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုသေတနတွေအတွက် အလွန်အရေးပါ ပါတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားဟာ သိပ္ပံပညာနဲ့ အခြားသော ယုံကြည်မှုများ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတွေနဲ့ အတုအယောင် သိပ္ပံ (pseudoscience) တွေကို ကွာခြားစေတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံသုသေတနတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ ၄င်းသုတေသနတစ်ခုလုံးရဲ့ အခြေခံအဖြစ် ခြုံငုံဆင်ခြင်နည်း(inductive reaso ning) နဲ့ ထုတ်ယူဆင်ခြင်နည်း (deductive reasoning) တို့ကို အဓိက အသုံးပြုရပါတယ်။ ခြုံငုံဆင်ခြင်နည်း […]
Philosophy and Formal Science, Uncategorized
August 7, 2016 by Thar Htet Aung Leaveacomment
အောက်ဖော်ပြပါ ကာတွန်းကတော့ Carl Sagan ရဲ့ Pale Blue Dot ကို ဘာသာပြန်ပြီး Gavin Aung Than မှာ သရုတ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကားလ်စေဂန်ဟာ နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ကို ပထမဆုံး မောင်းနှင်တဲ့ Voyager 1 ရဲ့ စီစဉ်သူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Voyager 1 ယာဉ်ဟာ စေတန်ဂြိုဟ်နားကို အရောက်မှာ ကားလ်စေဂန် […]
August 7, 2016 by Thar Htet Aung 1 Comment
စတားဝါးရုပ်ရှင်တွေထဲ ကကြယ်စုဝေးအင်ပါယာတွေ၊ ဧရာမကြယ်ပျံယာဉ်ကြီးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေလိုဂြိုလ်တွေကိုအငွေ့ပြန်စေနိုင်လောက်အောင်အဖျက်စွမ်းအားပြင်းထန်လှတဲ့သေမင်းတမန်လက်နက်(Deathstar)ကြီးတွေ၊ စတဲ့ခေတ်လွန်နည်းပညာမျိုးစုံကိုစာဖတ်သူတို့အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒီလို ထူးဆန်းပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ယန္တာရားတွေက တကယ်ရော ယုတ္တိရှိ့ပါရဲ့လား? ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဟောလီးဝဒ်ဇာတ်လမ်းတွေက မျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံရဲ့တိုးတက်မှုကိုရော ဘယ်လောက်အထိ ထင်ဟပ်ပါသလဲ။ သိပ္ပံနည်းကျ ညဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုရင် ကော ဒီလို နည်းပညာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိစောင့်ရမလဲ။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေနိုင်ဖို့အတွက် သိပ္ပံလွန်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက လူ(သို့)ဂြိုလ်သားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးသုံးစွဲနိုင်မှုအခြေအနေကွာဟမှုကို ယောဘုယအဖြစ်ခန့်မှန်းနိုင်မယ့်အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းအတာကတော့၁၉၆၄ခုနှစ်မှာ နီကိုလိုဟ် […]
Physical Science, Space, Technology and Applied Science, Uncategorized
“ကမ္ဘာနဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကြားမှာ တရုတ်ရေနွေးကရားတစ်လုံးဟာ နေကို ဘဲဥပုံစက်ဝန်းနဲ့ ပတ်နေတယ်။ အဲ့ဒီ ရေနွေးကရားဟာ အရမ်းသေးလွန်းတော့ ဘယ်လိုအားကောင်းတဲ့ မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်မမြင်ရဘူး ဆိုကြပါစို့။ ကျွန်တော်အဲ့ဒီလို လျှောက်ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အဆိုကို မချေဖျက်နိုင်ပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ လျှောက်ပြောနေတယ်လို့ လူတွေက သတ်မှတ်ကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ ဟိုးရှေးခေတ်ကတည်းက အစဉ်အလာအရ လက်ဆင့်ကမ်းလာတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ လူတွေယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။” – ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ် (Bertrand Russell) […]
နီကိုလာတက်စ်လာ၏ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော တီထွင်မှု ၁၀ ခု
August 6, 2016 by Thar Htet Aung4Comments
“Ere many generations pass, our machinery will be driven byapower obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” — Nikola Tesla, 1892 တက်စ်လာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ […]
Physical Science, Technology and Applied Science, Uncategorized